Ixesha kunye nabahlobo 10
Izifundo ekujongenwe nazo kwezi kholamu zinomdla onomdla kwaye ziphakamisiwe ngabafundi beLIZWI. AMADODA NABAHLOBO, sinqwenela ukugcina konke okucetyiswayo ngesihloko. Ayenzelwe ngenjongo nangayiphi na indlela yokuba nembambano. Imibuzo ebuzwa ngabahlobo iyazanywa ukuba iphendulwe yenye yazo nangendlela yabahlobo. Iimpikiswano, ngenxa yengxabano, azifane zilungele ubuhlobo.
Inqaku elilandelayo, elifumaneke kwakamsinya emva kokukhutshwa kwegama likaMatshi, alinakubonakala ngathi umfundi akafani ncam nemibuzo yangaphambili kunye neempendulo eziphantsi koMAMA NOMNGANI, kodwa ngenxa yomdla jikelele wezifundo ezixutyushwe kunye nesicelo sombhali Ukuba izichaso zakhe zipapashwe KWI-ILIZWI, UMHLOBO uya kuphendula kwizichaso zakhe njengoko eceliwe, kuyaqondwa ukuba inkcaso yimithetho-siseko kunye nezenzo zesayensi yobuKristu, hayi ezomntu-Ed. ILIZWI
ENew York, ngo-Matshi 29, 1907.
Ukuya kuMhleli we-Voice.
Umnumzana: KwiMatshi ka-Matshi kwi-MAGAMA, "Umhlobo" ubuza aphendule imibuzo eliqela malunga neNzululwazi yoBukristu. Ezi mpendulo zibonisa ukuba umbhali wamkele indawo ethile engalunganga kwiChristian Science, ethi, xa ekufikelelwe kwisigqibo esisengqiqweni, ingafani nokuziphatha kwawo onke amaqela enkolo. Umbuzo wokuqala, "Ngaba kuphosakele ukusebenzisa indlela yengqondo endaweni yokunyanga izifo zomzimba?" Uphendula ngokuthi "ewe." Kuyatshiwo ukuba “kukho iimeko apho umntu kufanelekile ukusebenzisa amandla okucinga ukoyisa ukugula emzimbeni , kwimeko apho sinokuthi ayilunganga. Ubuninzi beemeko ezithile kugqitywa kuphosakele ukusebenzisa ingqondo endaweni yokunyanga izifo zomzimba. "
Ukuba ngokusetyenziswa kwengqondo kuthetha ukuba umbhali ubhekisele ekusebenzeni kwengqondo yomntu kwenye ingqondo yomntu, ukususa ububi emzimbeni, ke ndiyavumelana naye ukuba ayichanekanga kwimeko nganye. Izazinzulu zobuKristu aziyisebenzisi ingqondo yomntu ngayo nayiphi na imeko ukususa ububi bomzimba. Kukho umahluko phakathi kweSayensi yoBukristu kunye nesayensi yengqondo, ethathelwa ingqalelo ngu “Mhlobo.”
Izazinzulu zobuKristu zisebenzisa iindlela zokomoya, ngomthandazo kuphela, zokunyanga izifo. Umpostile uJames wathi, "Umthandazo wokholo uya kusindisa abagulayo." Inzululwazi yobuKhrestu ifundisa indlela yokwenza "umthandazo wokholo," kwaye, kuba abaguli baphilisiwe ngomthandazo weSayensi yamaKristu, bubungqina bokuba "ngumthandazo lowo. zokholo. "Umhlobo" uphazamise ngaphandle kwengqondo uChristian Science kunye nonyango lwengqondo. Inzululwazi yoBukristu ixhomekeke ngokupheleleyo kuThixo, ngomthandazo, ngelixa inzululwazi yengqondo, nokuba isebenza ngokucebisa ngengqondo, uhanahaniso, okanye ubungqangi, kukusebenza kwengqondo yomntu kwenye ingqondo yomntu. Iziphumo zetyala lokugqibela zezethutyana kwaye ziyingozi, kwaye zikufanele ngokupheleleyo ukugwetywa okwenziwe ngu “Mhlobo.” Akukho mntu ke, onako ukuphikisa ukuthandaza kuThixo, kungekho namnye ongathi ukuthandazela omnye ngokunyaniseka kungaze kube ngokwenzakalisayo.
Omnye umbuzo ngulo, "Ngaba uYesu kwaye uninzi lwabangcwele aluzange luphilise ukugula ngokwasemzimbeni, ukuba kunjalo, ngaba kuphosakele?"
Ukuphendula lo mbuzo “Umhlobo” bayavuma ukuba babaphilisa abagulayo, kwaye kwakungekho siphoso ukuba benjenjalo. Uthi, nangona kunjalo, "UYesu kunye nabangcwele abayamkelanga imali yokunyanga," Kananjalo uthi, "Hayi indlela ebekungafani ngayo noYesu kwaye ngokungathandabuzekiyo kubonakala ngathi ku-Yesu okanye kubafundi bakhe okanye nakwabanye abangcwele babiza kakhulu ngokutyelelwa. Sonke isigulana, unyango okanye unyango.
Izibakala kukuba uYesu waphilisa abagulayo, kwaye wafundisa abafundi bakhe ukuba benze njani ngokufanayo. Aba bafundi bafundisa abanye, kwaye kangangeenkulungwane ezintathu amandla okuphilisa ayesenziwa rhoqo yicawa yamaKristu. Xa uYesu waqala wathumela iqela labafundi bakhe ukuba baye kushumayela ivangeli kwaye baphilise abagulayo, wathi mabangayamkeli intlawulo yeenkonzo zabo. Xa wabathumela kwixesha elilandelayo, kodwa wathi mabaphathe imithwalo yabo, watsho ukuba "umqeshwa kufanelekile ukuba awuqeshe." Lo mbhalo sele wamkelwe phantse iminyaka engamawaka amabini njengegunya elaneleyo ngabefundisi kunye Abanye babandakanyeka emsebenzini wobuKristu ukwamkela imbuyekezo ngenkonzo zabo, kwaye akunakubakho sizathu sakubakho ngaphandle kokukhetha imeko yabangamaChristian Scientists. Abefundisi baqeshelwa iicawa ukuba bashumayele kwaye bathandaze, kwaye phantse kuzo zonke iimeko bahlawulwa umvuzo osisigxina. Iingcali zeSayensi yoBukristu bobabini bashumayela ivangeli kwaye bathandaze, kodwa abafumani mvuzo umiselweyo. Ityala labo lincinci kangangokuba lincinci, kwaye lihlawulwa ngokuzithandela ngumntu ofuna uncedo. Akukho kunyanzelwa malunga nayo, kwaye nakweyiphi na imeko ngumbandela ophakathi komguli kunye nomcebisi apho abantu bangaphandle bengakhathalelwanga. Ukuze ube yingcali yezeNzululwazi yobuKristu, umntu kufuneka anikezele ngeshishini lokuziphilisa kwaye achithe ixesha lakhe lonke emsebenzini. Ukuze wenze oku, kufuneka okungenani babe neendlela ezithile ezifunekayo. Ukuba akukho sibonelelo senzelwa imbuyekezo kuyabonakala ukuba amahlwempu ebeya kukhutshwa ngokupheleleyo kulo msebenzi. Lo mbuzo uxazululwe yicawe yeChristian Science ngesiseko esifanelekileyo nesiyingeneyo kumaqela ngokwawo. Akukho sikhalazo sivela kwabo baphendukela kubuNzululwazi bobuKristu ngoncedo lokuba baninzi kakhulu. Isikhalazo esinjalo sidla ngokuvela kwabo bangenanto yakwenza neChristian Science. Nakuyiphi na imeko, kufuneka yamkelwe ngabo bonke abanqwenela ukusiphatha kakuhle eso sifundo, ukuba kulungile ukuhlawula abefundisi ukuba bashumayele, kwaye bathandazele ukuba baphinde bafumane abagulayo, kufanelekile ke ukubhatala iChristian Scientist ngoluhlobo iinkonzo.
(Isayinwe) VO STRICKLER.
Umbuzo uthi "samkele indawo ethile engathandekiyo kwiChristian Science, ethi, xa ufikelele kwisigqibo esifanelekileyo, ayifaneleki kuzo zonke iinkolo."
Ukuba le ndawo ayisiyithandi inzululwazi yobuKristu iyinyani, kodwa asiboni ukuba kwizigqibo zabo ezivakalayo ezi zakhiwo azinakuba zilungile ekuziphatheni kwawo onke amaqela enkolo. Inzululwazi yobuKristu iyagxininisa ukuba iimfundiso zayo zahlukile phakathi kweenkolelo zanamhlanje, kwaye ngokuqinisekileyo oko kuyinyaniso. Ngenxa yokuba ezo ndawo azingalunganga kwisayensi yobuKristu, akunakuphikiswa okulandelayo ukuba indawo enye isebenza kuyo yonke imibutho yezenkolo; kodwa ukuba onke amabhunga enkolo ebeya kuzikhanyela iinyani kwaye afundise ubuxoki, ke ngoko kufanelekile ukuba singabamkeli endaweni yethu kwiimfundiso nezenzo zabo, xa ithe ithe ke loo mcimbi wafuna ukuba uveze izimvo zethu.
Ebhekisa kumbuzo wokuqala kunye neempendulo kuwo, ovele kwi-Matshi WORD, i-1907, umbhali wale leta ingentla uthi kwisiqendu sesibini uyavumelana nathi ukuba "ukusebenza kwengqondo yomntu kwenye ingqondo yomntu, ukususa into yomzimba Ukugula, kuphosakele kuzo zonke iimeko. ”
Xa ufunda oku, kuphakama umbuzo ngokwendalo, sithini isidingo senkcaso okanye ingxoxo; kodwa simangalisiwe ngamazwi athi: "Izazinzulu zamaKristu azisebenzisi ingqondo yomntu kwimeko nayiphi na imeko ukususa ububi."
Ukuba kuyinyani ukuba ingqondo yomntu ayisebenzi ngusosayensi ongumkristu kwimizamo nakwindlela yakhe yokususa ububi emzimbeni, eli tyala liyasuswa kwiinkundla zehlabathi, kwaye ke ayisiyiyo nakweyiphi na inkundla yokubuza. Ke ngoko isazinzulu esingumKristu akufuneki sikhathalelwe naluphi na uluvo olungalunganga ngezenzo zakhe, kwaye sikwindawo yamalungu AMANQAKU NABAHLOBALI ukuzama ukujongana nomba ongahambelani nengqondo yomntu. Kodwa kubonakala ngathi akunakwenzeka ukuba ingxelo enjalo inokwenyani. Ukuba ibango lokuba ingqondo yobuThixo (okanye naluphi na olunye uhlobo lwengqondo) olususa izifo ezigwenxa emzimbeni, kwaye ingabi ngqondo yomntu, kuya kuthi ke ngaphandle kwengqondo yomntu ukuba ingqondo kaThixo ithathe inyathelo? Ukuba ingqondo kaThixo, okanye namphi na imigaqo “yesayensi” ayenzayo, iyenza, kwenzeka njani ukuba isenzo eso singakhange sicetyiswe okanye siqashwe ngengqondo yomntu? Kodwa ngaba ingqondo yobuThixo ikwazile ukwenza kunye nokususa ukwenzakala emzimbeni ngaphandle kwengqesho okanye ukusetyenziswa kwengqondo yomntu, ke kutheni le nto ukuba ungenelelo lwenzululwazi yomKristu luyimfuneko ukususa izifo zomzimba zalo naluphi na uhlobo? Kwelinye icala, eyona ndlela ingekuko ukuba akukho naluphi na uThixo okanye ingqondo yomntu ayiqeshwanga ekususeni ukugula emzimbeni. Ukuba kunjalo, kwenzeka njani ukuba thina bantu, ngaphandle kokusebenzisa ingqondo yomntu, sazi okanye sithambe ukuba izifo ezasemzimbeni, okanye ingqondo yengqondo, okanye ingqondo yomntu, ikhona. Umbhali wale leta uqukumbela isiqendu sesibini ngokuthi: “Kukho umahluko phakathi kweSayensi yeChristian kunye nesayensi yengqondo, ethathelwa ingqalelo 'nguMhlobo.' ''
Siyavuma ukuba besingawazi lo mahluko phakathi kwesayensi yobuKristu nesayensi yengqondo. Umahluko owenziwe yinzululwazi yomKristu uxhasa isayensi yezengqondo, kuba, ngokwengxelo ebhalwe ileta, isazinzulu ngengqondo sisebenzisa ingqondo yomntu, lo gama isazinzulu esingumKristu singavumi.
Ekuqaleni kwesiqendu sesithathu umbhali wale leta uthi: “Izazinzulu zamaKristu zisebenzisa iindlela zokomoya ngokuthandaza kuphela ukuze ziphilise izifo. Umpostile uYakobi wathi, 'Umthandazo wokholo uya kusindisa abagulayo.' ''
Ezi ngxelo ziyabhidisa kunokuba zicacisa iikowuteshini ezingaphambili. Umbuzo uphakama ngokwendalo, nguwuphi umahluko Umbhali anqwenela ukuwuhambisa phakathi kwokomoya kunye neendlela zengqondo? Kwi-psychic, i-mesmerist, kunye ne-psychologist ye-amateur, onke amanyathelo awakholelwa ukuba abangelwa sisizathu somzimba akhanyiselwe phantsi kwentloko eqhelekileyo kwaye ibizwa ngokuba yi-psychic, psychology, okanye yokomoya; ngokukhethekileyo ngokomoya. Akucaci ukuba Umbhali uzimisele ukusebenzisa ibinzana lakhe elithi "iindlela zokomoya," ngaphandle kokuba ebambe ukuba umthandazo awungukusebenza kwengqondo. Kodwa ukuba umthandazo awungomsebenzi wengqondo, okanye awuhambelani nengqondo yomntu, uyintoni ke umthandazo? Ngubani lo uthandazayo? Uthandazela ntoni, kwaye uthandazela bani, kwaye uthandazela ntoni?
Ukuba lowo uthandazayo usosayensi ongumKristu, angawuqala njani umthandazo wakhe ngaphandle kwengqondo yomntu? Kodwa ukuba akasengumntu kwaye abe ngumntu waphezulu, ke akufuneki athandaze. Ukuba umntu uyathandaza, sithatha ukuba umthandazo wakhe ujolise kumandla aphezulu kunawakhe, ngenxa yoko umthandazo. Kwaye ukuba ungumntu kufuneka asebenzise ingqondo yakhe ukuthandaza. Lowo uthandazayo kufuneka athandaze ngento ethile. Undoqo kuku, ukuba uthandaze malunga nokugula emzimbeni, nokuba ezi zinto zisemzimbeni ziyakususwa. Ukuba ukungeniswa komthandazo kukususwa kwezigulo zomzimba, umntu othandazayo kufuneka asebenzise ubuntu bakhe kunye nengqondo yakhe ukuba azi malunga nokugula ngokwasemzimbeni kwaye acele ukususwa kwakhe ukuze kungenelwe umntu onengxaki yokugula. Umthandazo ngumyalezo okanye isicelo esibhekiswe emntwini, amandla okanye umgaqo okhupha isigulo esisiso. Kuyatshiwo ukuba umthandazo ubhekiswa kuThixo; kodwa lowo unqwenela ukujongana ngokufanelekileyo nomyalezo okanye uxwebhu lwezikhalazo kulowo uphantsi, olinganayo, okanye ongaphezulu, kufuneka ayazi indlela yokuphendula lo myalezo okanye uxwebhu lwezikhalazo ngendlela eya kuthi ifumane iziphelo ezifunwayo. Umntu othandazayo okanye othandazayo akavumanga ukuba negunya elingaphantsi kuye, kuba lingenako ukusinika isicelo, engasayi kubuza komnye alingana naye ukwenza oko anokukwenza. Kusengqiqweni ke ngoko ukucinga ukuba oyena mntu ubhenela kuye ungaphezulu. Ukuba unamandla amakhulu kwaye ulumkile konke ngokusebenzayo, isicelo eso kufuneka sibambe lowo kubhekiswa kuye into angayaziyo. Ukuba akayazi, akabinabulumko bonke; kodwa ukuba uyayazi, sisenzo sokuqaqanjelwa kunye nokutshutshiswa komceli wesicelo sokucela isilumko sobulumko nobugorha bayo yonke into ukuba yenze isenzo, ngenxa yokuba isicelo sibonisa ukuba ubukrelekrele bobugqili bonke bungakhathalelwa. ukwenza into ebefanele ukuba uyenzile, okanye ubengazi ukuba mayenziwe. Ukuba kuvumela, kwelinye icala, ukuba ubukrelekrele bubulumko bonke kwaye unamandla onke, kodwa azange azikhathaze ngemicimbi yabantu, ke lowo uthandazayo okanye othandazayo ukuba asuswe kwezifo zasemzimbeni kufuneka azazi ezo zigulo zomzimba, kwaye usebenzisa ingqondo yakhe yomntu ngandlela ithile ukwazisa isigulo somzimba ngokuthandaza kuThixo, ubukrelekrele. Uxwebhu lwezikhalazo malususwe ububi, kwaye ke nangaliphi na imeko ingqondo isetyenziselwa iziphelo zomzimba. Isiqalo sesomzimba, inkqubo kufuneka ibe yengqondo (nantoni na enokulandela); Kodwa isiphelo sesomzimba.
Malunga nomthandazo wokholo umbuzo ophakamayo: yintoni ukholo? Yonke into ekwimo yomntu inokholo, kodwa ukholo lwenye alukholwa lomnye. Ukukholelwa kubugqwirha kwiziphumo eziyimpumelelo zezenzo zakhe kwahlukile kunokholo lwenzululwazi yomkristu onokuthi aphumelele kwizenzo zakhe, kwaye zombini ezi zinto ziyahluka kukholo lukaNewton, Keppler, Plato, okanye uKrestu. Umntu othanda ukholo onokholo olungaboniyo kuthixo wakhe ufumana iziphumo njengawo nawuphi na okhankanywe apha ngasentla onokholo. Okubizwa ngokuba yimpumelelo njengenyathelo lokusekelwa kwinkolelo engaboniyo, ukuqikelela ngokuzithemba, okanye ulwazi lokwenyani. Iziphumo ziya kuba ngokokholo. Umgaqo wokholo uyafana kwilinye, kodwa ukholo luyahluka kwinqanaba lobukrelekrele. Ke ngoko, ukuba izazinzulu zamaKristu zithi ziphilisa ngomthandazo wokholo, ke iimpiliso ezenziweyo kufuneka zibe ngokomgangatho wokholo ekusebenziseni kwalo ngobukrelekrele. Isenokuba yeyokwaluka okanye yobuThixo; kodwa nangayiphi na imeko, kuba umpostile uYakobi wathi "umthandazo wokholo uya kusindisa abagulayo," ayenzi njalo. Inyani ingamangqina kwaye ayiyompostile uYakobi.
Umbhali uhlabela mgama esithi: "'Umhlobo' uphazamise unyango lweChristian Science engajonganga kunye nonyango lwengqondo."
Ukuba kunjalo, “umhlobo” uyayivuma impazamo yakhe; kodwa akayiboni indlela izazinzulu ezingamaKristu ezinokufunda ukwenza, kwaye zenze 'umthandazo wokholo,' ”ngaphandle kokusebenzisa iingqondo zabo. Ukuthandabuza kubonakala ngathi kuyaxhaswa yile nkcazo ilandelayo: "Inzululwazi yobuKristu ixhomekeke ngokupheleleyo kuThixo ngomthandazo, ngelixa oko kubizwa ngokuba yisayensi yengqondo, nokuba isebenza ngokucebisa ngengqondo, ukuhanahanisa okanye ukuhambisa imiyalezo, kukusebenza kwengqondo yomntu kwenye ingqondo yomntu. . Iziphumo zetyala lokugqibela zixeshana kwaye ziyingozi, kwaye zikufanele ngokupheleleyo ukugwetywa okwenziwe 'nguMhlobo.' ''
Ngeli thuba asithethi njengososayensi bezengqondo kwaye sithi ezi ngxelo zingasentla zichanekile, kusezincwadini zabo oososayensi bezengqondo abathi babambelele ngoThixo ngokupheleleyo, okanye ngalo naliphi na igama abanokuthi balichaze ngoThixo. Oku akwenzi kucace umahluko obangelwe ngumbhali, ngenxa yezizathu esele ziphambili. Unyango olwenziwe zizazinzulu ngengqondo lubangwa ngabo ukuba lusebenze kwaye lukhona ngokulingeneyo kwiingcali njengezonyango zoosonzululwazi bobuKhrestu. Nokuba yeyiphi na imigaqo yonyango ebandakanyekayo, unyango lukhona lwenziwa zimbini iintlobo “zezenzululwazi.” Kodwa ke, amabango wombhali wale ncwadi ingentla yesayensi yobuKristu, njengoko ichazwa kukrokrelo lwenzululwazi yezengqondo ngalo. omjongileyo akakholiswa nguye. Oku kubonakala ngokusetyenziswa nokungabikho koonobumba abakhulu ngegama elithi "Inzululwazi yobuKristu" kunye "nesayensi yengqondo." Kuyo yonke le leta amagama athi "Christian Science" okanye "Scientists" capitalised, xa bethetha ngenzululwazi yezengqondo okanye ngoososayensi, iintloko azikho ngokubonakalayo. Ngasekupheleni kwesi siqendu singasentla sifunda oku: "Kodwa, akukho namnye unokunqabela ukuthandaza kuThixo, kwaye akukho mntu unokutsho ukuba ukuthandazela omnye ngokunyaniseka kunokwenzakalisa."
"Umhlobo" uyangqina la mazwi, kodwa kufuneka ongeze ukuba umthandazelelo komnye, unyanisekile kwaye uyingenelo, kufuneka ungazingcali; Umthandazo nokuba yeyenzuzo ebonakalayo yomnye, ukuba kuzakubakho intlawulo yomntu okanye irisithi yemali, ayinako ukungcungcutheka kwaye iyayeka ukungazingci, kuba izibonelelo zobuqu ziya kufunyanwa ngaphandle kwesibonelelo esivela kwi ulwazi lwenkonzo esebenzayo.
Kumhlathi oqala: "Inyani yile yokuba uYesu waphilisa abagulayo, kwaye wafundisa abafundi bakhe ukuba benze njani ngokufanayo," Iinzame zethu zomnxibelelanisi zibonisa ubungqina bezenzo zobunyani bezesayensi ngokuthatha umvuzo, ngoku kulandelayo: “Xa uYesu wayeqala Wathumela iqela labafundi bakhe ukuba liye kushumayela ivangeli kwaye baphilise abagulayo, wathi mabangamkeli iintlawulo ngenxa yeenkonzo zabo. Xa wabathumela kwixesha elilandelayo, wathi kubo mabaphathe iingxowa zabo, watsho ukuba 'umsebenzi uwufanele umvuzo wakhe.' ''
Isalathiso sokuqala kwiTestamente eNtsha esisebenza kwingxelo yoMnxibelelanisi wethu sifumaneka kuMate., Isahl. x., vs 7, 8, 9, 10: “Kwaye, njengoko nihamba, shumayelani, nisithi, Ubukumkani bamazulu busondele. Philisa abagulayo, hlambulula abaneqhenqa, vusa abafileyo, ukhuphe iidemon. Musani ukuyikhangela igolide, nesilivere, nokuba lubhedu, emibhinqweni yenu; nangxowa yandlela, nangubo zangaphantsi ngambini, nambadada, nazintonga. kuba umsebenzi uyifanele inyama yakhe.
Akukho nto siyibonayo ngentla apha eyalela ukuba isazinzulu esingumKristu sibuze ngembuyekezo. Kwinyani ingxelo ethi "Nifumene ngesisa, yiphani ngesisa," iyaphikisana nayo.
KuMarko, isahl. vi., vs 7-13, sifumanisa ukuba: “Kwaye wababizela kuye abalishumi elinababini, waqala ukubathuma ngababini, ngababini, wabanika amandla koomoya abangcolileyo; wabathethela ngelithi, mabangaphathi nto yohambo, bangasebenzi bodwa; Akukho sikhwama, akukho sonka, akukho mali esikhwameni sabo. Ke nina bhinqani iimbadada, ndinxibe iingubo zangaphantsi ezimbini. Baphuma ke baya kuba beshumayela ukuba abantu mabaguquke. Bakhupha iidemon ezininzi, bayithambisa ngeoli imilwelwe emininzi, beyiphilisa.
Oku kungasentla akuphikisani nokuxhasa ukwenziwa koososayensi abangamaKristu, kwaye eneneni izazinzulu zamaKristu azinakubanga ukuba zilandela nayiphi na le miyalelo ingasentla.
Isalathiso esilandelayo esifumana kuLuka, isahl. I-ix., i-1-6: “Ke kaloku, ebabizele ndawonye abafundi bakhe abalishumi elinababini, wabanika amandla negunya kuzo zonke iidemon, nokuphilisa izifo. Wabathuma ukuba babuvakalise ubukumkani bukaThixo, bayiphilise imilwelwe. Wayesithi kubo, Ningaphathi nto yandlela, namisimelelo, nangxowa yamphako, nasonka, namali; neengubo ezimbini zangaphantsi. Nakuyiphi na indlu eningena kuyo, hlalani khona, nimke apho. Basuka ke, bayihambahamba iidolophu, beshumayela iindaba ezilungileyo, bephilisa ezindaweni zonke. Akukho ndawo ikhankanyiweyo ngentla yembuyekezo, kunye nemiyalelo efanayo malunga ukungabikho komvuzo, ukucaca kwengubo, kuyabonakala. Oku kungasentla kuyamxhasa uMcebisi wethu kumabango akhe.
Isalathiso esilandelayo kukuLuka, isahl. x., vs 1-9, apho kwathiwa: "Emva kwezi zinto iNkosi yonyula abanye abamashumi asixhenxe, yabathumela ngababini phambi kobuso bayo, kuyo yonke imizi neendawo, apho ibiza kuza yona. okanye isikhwama, nazimbadada; kwaye musani ukubulisa mntu ngendlela. Nendlu enisukuba ningene kuyo, yithini kuqala, Uxolo malube kule ndlu. Ukuba angaba ulapho owoxolo, uxolo lwenu lohlala phezu kwakhe, ukuba akunjalo, lobuyela kwakuni. Hlalani ke kwakuloo ndlu, nisitya, sisela, izinto ezinikwayo, kuba umsebenzi uwufanele umvuzo wakhe. Musani ukuya kwindlu ngendlu. Emzini ke enisukuba ningene kuwo, banamkele, yidlani into ebekwa phambi kwenu. Niphilise abagulayo abakuyo, nithi kubo, Ubukumkani bukaThixo busondele kuni.
Oku kungentla kunesicatshulwa esileta "ukuba umqeshwa ufanele umvuzo wakhe"; kodwa ke lo msebenzi uqeshiweyo 'kukutya nokusela izinto abanikezela zona.' Ngokuqinisekileyo kule ngxelo uMcebisi wethu akanakubanga ilungelo lokufumana imbuyekezo ngaphandle kokutya nokusela akunikiweyo endlwini yesigulana. Zonke iimbekiselo ukuza kuthi ga ngoku zichasene nokufumana enye intlawulo ngaphandle kokutya nendawo yokuhlala enikwa umphilisi. Kwaye njengoko kubonisiwe kwii-MOMENTS KUNYE NABANGANI, indalo ihlala inika oku kumphilisi wokwenene.
Ngoku siphendukela kwisalathiso sokugqibela, uLuka. isahl. IXxii., vs. 35-37: "Ithe ke yona kubo, Okuya ndanithuma ningenangxowa yamali, nangxowa yamphako, nazimbadada, khe naswela nto na? Bathi, Akukho nto. Ithe ke kubo, Kungokunje, lowo unengxowa yemali, makayithabathe, enjenjalo nonengxowa yomphako: nalowo usweleyo, makathengise ngengubo yakhe, athenge. Kuba ndithi kuni, Oku kubhaliweyo kusamele ukufezeka kum. Waye wababalwa phakathi kwaboni, kuba ezo zinto zinam.
Intsingiselo kwezi ndinyana zingaphambili ibonakala ngathi uYesu wayengasayi kubafundi, kwaye nokuba kuya kufuneka balwe ngendlela yabo; kodwa ke akukho kubhekiswa kwimbuyekezo kunyango lwesifo. Ngapha koko, umyalelo wokuthatha imithwalo yabo kunye neskripthi sabo kunye nabo unokuphakamisa okuchaseneyo nembuyekezo: ukuba kuya kufuneka bahlawule ngendlela yabo. Kule nyaniso, oko ukuqhubela phambili komnxibelelanisi wethu njengobungqina bokuxhasa amabango kunye nemisebenzi yesayensi yobuKristu, kuya kuba ngokuchasene noko. Umnxibelelanisi wethu ulimaze imeko yakhe ngento ayixhasayo. Imiyalelo enikelwa nguYesu ayilandelwa nokuba kungoMoya okanye kwileta. Izazinzulu zobuKristu azingomaKristu kwiimfundiso zazo kwaye azingabo abafundi bakaYesu; Bangabafundi bakaNkosazana Eddy, kunye nabaphakamisi ngeemfundiso zakhe, kwaye abanalungelo lakuqhubela phambili iimfundiso zikaYesu nokuba zezo okanye iimfundiso zikaNkosikazi Eddy okanye ngenkxaso yamabango abo kunye nezenzo zabo.
Umnxibelelanisi uqhubeka athi: "Lo mbhalo wamkelwe phantse iminyaka engamawaka amabini, njengegunya elaneleyo ngabefundisi nabanye ababandakanyekayo emsebenzini wobuKristu, ukwamkela imbuyekezo ngenkonzo zabo, kwaye akunakubakho sizathu sivakalayo sokukhetha ecaleni Zazinzulu Zinzululwazi. ”
Akubonakali kufanelekile ukuba izazinzulu zamaKristu zilandele imikhwa ethile yabefundisi becawa yamaKristu, kwaye zizithethelele ngokwamkela imbuyekezo kuba abefundisi beyenza, kwaye kwangaxeshanye ziligatye ngokupheleleyo ibandla lobuKristu kwiimfundiso zalo eziphambili, kwaye ukuzama ukufaka ubuKristu ngenzululwazi yobuKristu. Icawe yamaKrestu ibona izinto ezithile kwaye ifundise iimfundiso ezithile, ezigwetywa ngamakhulu amawaka abantu beNgqobhoko, kwaye iinkokheli zecawa yamaKristu yazo zonke iicawa benza ngokungahambisani neemfundiso zikaYesu, nangona babambelela kwiimfundiso; kodwa oku akunanto yakwenza nokungalunganga, ukuba akulunganga, ukuba izazinzulu zamaKristu zamkele imali ngokususa izifo ngokwasemzimbeni ngeendlela zengqondo, okanye, ukuba eli binzana likhethekile, ngeendlela zokomoya, kuba ukuba nguThixo okanye ngendlela yokomoya, iziphumo Ukunyanga, ke ukunyanga okukaThixo, kusisipho somoya, kwaye ke isazinzulu somKristu asinalungelo lokwamkela imali ebonakalayo apho singakhange senze unyango, kwaye sifumana imali phantsi kobuxoki.
Umbhali uhlabela mgama esithi: “Abefundisi baqeshelwa iicawa ukuze bashumayele kwaye bathandaze, kwaye phantse kuzo zonke iimeko bahlawulwa umvuzo osisigxina. Iingcali zeSayensi yamaChristian zishumayela ivangeli kwaye zithandaze, kodwa abafumani mvuzo umiselweyo.
Ngokuqinisekileyo oku kuyinyani, kodwa, amadoda alungileyo eshishini, aqokelela ukuhlawula ixesha labo kunye nomsebenzi. Ukuqhubeka nombuzo wembuyiselo, umbhali uthi: "Ityala labo lincinci kangangokuba alikho elincinci, kwaye lihlawulwa ngokuzithandela ngumntu ofuna uncedo."
Ukuba isimangalo sincinci kwaye sinqabile kwaye sihlawulwe ngokuzithandela sinokubakho ngendlela efanayo ukuba indoda inokunikezela ngesipa sayo xa icinga ukuba ingcono, okanye ukuba isifundo esityikityiweyo siya kuthi ngokuzithandela senze into yakhe kwaye sinike imali yakhe kwinto yakhe. i-hypnotist. Ibango lokuba izazinzulu zamaKristu azinamvuzo imiselweyo nokuba izityholo ezincinci zincinci kangangokuba zincinci, azinantsingiselo kwaye kufuneka zibhenele kubuchule bomfundi. Ingeniso yeengcali zabafundi kunye necawa yesayensi yobuKristu "incinci kangangokuba incinci" kuphela xa kuthathelwa ingqalelo amathuba exesha elizayo lenzululwazi yobuKristu.
Ebhekisa kwingxelo yoMmeli wethu yokuba "ityala labo lincinci kangangokuba lincinci," kunye "Lo mbuzo ugqitywe yiCawa yeChristian Science ngesiseko esifanelekileyo nesanelisayo kumaqela ngokwawo. Akukho sikhalazo kwabo baphendukela kwi-Christian Science ukuze bancedwe. ”
Sibalisa oku kulandelayo kwiimeko ezininzi apho ingqalelo yethu ibizelwe kuyo. Injineli kuloliwe wasekuhlaleni wayenomdla ongazenzisiyo ngengalo yasekunene eyayisongela ngokumbambisa emsebenzini. Uncedo aluzange lufunyanwe kugqirha abaninzi. Iingcebiso ngogqirha zakhe zazilandelwa nangaliphi na ixesha kunokwenzeka, kwaye nabo asebenza nabo bamnika indlela yokuba athathe uhambo lokuya elwandle njengoko kucetyisiwe. Kodwa oku akuphumelelanga nasiphi na isibonelelo. Emva koko wazama ugqirha wesayensi kwaye waphumelela. Oku kwabangela ukuba ajoyine ihlelo kwaye waba likholwa elinenzondelelo, kwaye wazama ukuguqula abahlobo bakhe njengoko babeza kummamela. Kodwa akazange aphiliswe. Ngenye imini wabuzwa, kwakutheni, ukuba uye wancedwa kangaka, ugqirha wakhe owayengusosayensi ebengenakumphilisa. Impendulo yakhe yayingu: “Andinakukwazi ukuba andiphilise.” Xa ebuzwa ukuba ayicacisele, wathi uyithathile yonke imali awayenokukrola kunye ukuze akhululeke njengoko wayenjalo, kwaye akazange akwazi ukufumana imali eyaneleyo kunye yokunyanga ngokupheleleyo. Uye wachaza ukuba isazinzulu esingumKristu asinakukwazi ukunika ixesha lakhe ngokwaneleyo ukuba sisebenzise unyango ngaphandle kokuba sihlawulelwe; ukuba isazinzulu esingumKristu kufuneka siphile, kwaye njengoko wayexhomekeke ekubeni aphile kumrhumo ofunyenwe zonyango, wayenokubaphilisa kuphela abo babenako ukuhlawulela unyango. Ukuvota kwesayensi yobuKristu kwakubonakala ngathi kucinga ukuba kufanelekile ukuba angaphiliswa ngaphandle kokuba wayenemali yokuhlawulela unyango.
Eqhubeka nomba wokufumana imali kwizigulana ngezibonelelo azinikezelwayo, uMcebisi uthi: "Akukho kunyanzeliswa malunga nayo, kwaye nakweyiphi na imeko ngumbandela ophakathi komguli kunye nogqirha, apho abantu bangaphandle bengakhathalelwanga."
Kuyabonakala ukuba akukho kunyanzelwa ukuba wamkele intlawulo okanye uyihlawule. Lo ngumbuzo oshiyekelekileyo ukuba uqondwe, kodwa uMnxibelelanisi akanakuwulahla ngokulula umbandela wenxalenye yokugqibela yesivakalisi. Ukuba bangaphandle abayikhathalelanga imicimbi yobuqu phakathi kwendoda nendoda kuyinyani; kodwa oku akusebenzi kwinkqubo yesayensi yobuKristu. Inzululwazi yobuKristu izama ukwenza ukuba iimfundiso zayo zaziwe, kwaye imisebenzi yabo ayisiyomcimbi wabucala nowabantu phakathi komntu nomntu. Iindlela zesayensi yobuKristu yinto yomphakathi. Zichaphazela iimfuno zoluntu, ilizwe, kunye nehlabathi. Zibetha emigudwini yabantu; bayaziphika iinyani, becinga ubuxoki, bahlasela imo yokuziphatha okuhle nokubi, zichaphazela ukungafihlisi nengqibelelo yengqondo; bathi ubusazi obusebenzisekayo kunye nokuqonda okungapheliyo komsunguli wehlelo labo, umfazi ulikhoboka kubuthathaka bakhe bohlobo lomntu; baya kwenza kwaye banciphise umhlaba wokomoya ukuba ube ngumkhonzi weli lizwe lomzimba; Inkolo yabo ilungele ukubonakala ngathi, injongo yayo ephambili, kukunyanga izifo, kunye nokuzonwabisa komzimba. Icawe yenzululwazi yobuKristu isekwe kwaye yakhelwe kunyango lwezifo zomzimba, ngamehlo kwimeko yomzimba. Yonke inkolo yesayensi yobuKristu iguqukela kwimpumelelo yehlabathi kunye nokuphila kubomi bomzimba; nangona ibanga ukuba yeyokomoya kwimvelaphi, injongo, kunye nokuziqhelanisa. Impumelelo ebomini kunye nempilo yomzimba ilungile kwaye ilungile; kodwa yonke loo nto yakhelwe phezu kwayo icawa yesayensi yamaKristu, ikhokelela kude kunqulo lomgaqo kaKristu nangoThixo oyinyaniso. Ngososayensi abangamaKristu, abagwebayo ngamabango abo, uThixo ukhona ngokuyintloko ngenjongo yokuphendula imithandazo yabo. U-Kristu ukhona kodwa ungumlinganiswa ekufuneka abhekiswe kuye ukungqina ukuba inzululwazi yomKristu ifanelekile kwimikhwa yakhe, endaweni kaThixo okanye ka-Kristu kunye neyenkolo, u-Mnu Eddy ngabo unobuqili kwaye wabekwa e-halo yozuko kwaye waguqulwa ngu Benze into egudileyo, imimiselo yabo inxaxhileyo kwaye isilele, ekungekho kulungiswa okanye kuguqulwa.
Ezi zivakalisi zithathu zilandelayo emva kweleta zaphendulwa ngaphakathi
Isivakalisi esilandelayo, nangona kunjalo, sibonisa into eyahlukileyo, nangona sithetha ngembuyekezo. "Lo mbuzo uxazululwe yicawa yeChristian Science ngesiseko esifanelekileyo nesanelisayo kumaqela ngokwawo."
Ewe kunjalo; kodwa oku kuphela kwento nayiphi na into eyonakeleyo yezopolitiko okanye ebizwa ngokuba yeyenkolo. Nangona inokubonwa njengefanelekileyo kwaye inelisile kwizazinzulu zamaKristu, akunjalo ngoluntu ngokungaphezulu kunokuba kunokuba bekuya kuba njalo amabanjwa endlela yokuphambukela angavunyelwa ukuba enze oko banokucinga banoluvo kufaneleke kwaye kufanelekile .
Umbhali wale leta uqukumbela ngelithi: “Nakuyiphi na imeko kufuneka yamkelwe ngabo bonke abanqwenela ukuwaphatha kakuhle lo mbandela, ukuba kufanelekile ukuhlawula abefundisi ukuba bashumayele kwaye bathandazele ukubuyela kwabagulayo, kulungile. ilungelo lokuhlawula uChristian Scientist ngezi nkonzo. "
Siphinda sitsalele ingqalelo kwinto engalunganga yokuzama ukugxeka, ukuba sikhona, ngabefundisi becawa yamaKristu, nokuzithethelela ngezenzo zenzululwazi yobuKristu ngokuqhutywa ngabefundisi bobuKristu. Ayisosiko okwicawa yamaKristu ukuba abefundisi bafumane umvuzo wokuthandazela abagulayo. Yena, njengoko waboniswa yinzululwazi yamaKristu, ufumana umvuzo osisigxina wokushumayela ivangeli njengomlungiseleli wecawe, hayi njengomphilisi. Kodwa umbuzo obandakanyekileyo asingowokuba kulungile okanye kuphosakele ukuhlawula abefundisi ukuze bashumayele kwaye bathandazele ukuba baphiliswe abagulayo, ngenxa yoko babhengeza inzululwazi yobuKristu ngenkonzo efanayo.
Iinzame zokuphosa impikiswano ngabefundisi bobuKristu zenza buthathaka ingxoxo yenzululwazi yobuKristu. Umbuzo ngulo: Ngaba kulungile okanye kuphosakele ukuthatha imali ngenxa yesipho somoya? Ukuba ayilunganga, ke nokuba abefundisi bayayenza okanye ayenzi, akukho sizathu sokwenza ubuxoki okanye amabango enziwe ngoososayensi abangamaKristu.
Ngokubhekisele kwisiseko senzululwazi yobuKristu, kubonakala ukuba ukuba yonke into enokwenzeka yokwenza imali kuye nokuba ifundise iimfundiso zesayensi yobuKhrestu okanye ukunyanga, okanye ukuzama ukunyanga, ukugula emzimbeni kususwe inkolo iyakuphela. Abenzi bemali yesayensi abasebenzisa imali banokuphelelwa kukusihlonipha, okanye bangasisebenzisi. Ngokubhekisele kubakholwayo kwisayensi yamaKristu, ukuba ukuphiliswa kwezifo zasemzimbeni kuphelile, isiseko sokukholelwa kwabo kwiimfundiso zesayensi yobuKristu kuya kubhangiswa, kwaye "ngokomoya" wabo uya kunyamalala ngokusisiseko somzimba.